Vovoka madinidinika miorina amin'ny Sodium ambany-sôdiôma (HA)
Ny YUFA Group dia nanambola fikarohana teknika marobe tamin'ny indostria ambany-sodium alumina.
Izahay dia namolavola teknolojia ambany-sodium mandroso iraisam-pirenena ho valin'ny filan'ny tsenan'ny alumina ambany-sodium, izay nahatsapa tsara fa fanaingoana.
1. Na2O atiny mety ho latsaky ny 0.01%
2. Mety amin'ny fampiharana vokatra isan-karazany
Andiany Alumina kely misimisy sôdiôma (CA) ho an'ny seramika
YUFA Group dia afaka mamokatra seramika seramika seramika isan-karazany izay mety amin'ny fanerena famonoana mafana, fanerena isostatika, na fanerena maina ary dingana hafa mamorona.
1. Sodium ambany, izay mety ambany 0,1%.
2. Alumina madio madio
3. Ny haben'ny Crystal dia azo namboarina
Calcined Alumina (RA) andiany ho an'ny fitaovana refractory
YUFA Group dia namolavola alimina vita amin'ny calculated avo lenta avo lenta mifototra amin'ny 30 taona niainany tamin'ny famokarana.
Ireo akora miorina amin'ny hafanana vita amin'ny alimina vita amin'ny alàlan'ny fampiasana haitao famokarana manokana sy ireo kozatra famolavolana lozika mandroso sy famokarana tonelina dia amidy amina tsena 40 mahery any ivelany.
1. Miaraka amin'ny hakitroky betsaka indrindra, ahenao ny fanjifana rano amin'ny refraktera tsy namboarina
2. Ny kristaly tany am-boalohany dia kely ny habeny, manana fihetsiketsehana manara-penitra avo lenta sy fitoniana amin'ny volavola
3. Mihena na manolo ny habetsaky ny vovoka manify tena hafa ary manatsara ny toetran'ny mekanika amin'ny hafanana avo lenta
Calcined Alumina (PA) andiany ho an'ny famolahana
Ny alimina vita amin'ny kajy poloney dia vokarina amin'ny habe samihafa miankina amin'ny filan'ny mpanjifa. andian-dahatsoratra
1. Andiam-pamolavola tsara: Ny kristal voalohany dia latsaky ny 1 μm 2. Andiam-poloney antonony 3. Manokana ho an'ny savoka volomparasy somary volo
Calcined Alumina (FA) andian-dahatsoratra ho an'ny famoahana hafanana
Alumina dia manana tombony amin'ny fifehezana ny hafanana sy ny insulation, ary azo ampiasaina ho toy ny mpameno conductive thermally ho an'ny fanomanana lakaoly insulatement thermally conductive, poti lakaoly ary fitaovana polymer hafa.
Ny alumina mitondra fitondran-tena dia kristal kristaly vovoka fotsy ateraky ny toetr'andro avo. Betsaka ny vovo-dronono kristaly. Ny alumina ampiasaina amin'ny fitondran-tena mafana dia misy ny alumina boribory, ny alumina quasi-spherical, ary ny alumina mitambatra.
1. Ny fizarana haben'ny sombin-javatra mety, ny tahan'ny famenoana avo, ny viscosity ambany ary ny fifangaroan'ny fluidity mety azo
2. Fitaovana mafana be, raha ampitahaina amin'ny silika kristaly, avo ny fitarihan'ny hafanana mifangaro
3. tahan'ny abrasion ambany: boribory ny fisehoany, ary kely ny fanosotra ny mixer sy ny bobongolo
4. Ny votoatin'ny fahalotoan'ny sodium sy ny klôro dia kely dia kely, ary manana fanoherana hamandoana elektrika tsara izy io
Andian-tsarimihetsika ambany kalsioma ambany sôdiôma (SA) ho an'ny solomaso manokana
Ny YUFA Group's α-Alumina dia mampiasa dingana vita amin'ny kalisa tokana ary manana ny toetra mampiavaka ny fahadiovana avo, atiny Fe2O3 ambany. Izy io no akora fototra ho an'ny substrate fitaratra LCD sy fitaratra rakotra aluminium avo.
1. Fahadiovana avo sy loto maloto ambany.
2. Taham-panovana dingana ambony alpha.
Seramika Ceramic Granulation Powder (GA) ho an'ny keramika Alumina
YUFA Group dia misafidy alimina madio madio sy haben'ny potika mety, izay mampiasa fomba faneriterena na fantsom-panafody mba hamokarana 92, 95, 99, 99.5 ary ireo masontsivana hafa momba ny vovo-tany. Izy io dia mety amin'ny fanindriana maina, fametahana haingana, fanerena isostatika ary fomba hafa.
1. mari-pana mamorona seramika ambany
2. Tsy fitoviana vovoka tsara
3. avo hakitroka, tsy misy pores amin'ny famolavolana seramika
YUFA Group koa dia manampahaizana manokana amin'ny famokarana insulated ceramic insulator, fantsom-boaloboka, mpamono lavadrano ary vokatra hafa. Amin'ny fampiasana tsindry isostatika, ny hafanana be dia be ho lasa seramika. Izy io dia afaka mamokatra bara maro hafa, fantsom-bakoly ary vokatra hafa manana halavana latsaky ny 150 mm.
1. matevina avo
2. Hery lehibe
3. Fiatrehana herinaratra tsara
4. Fifanarahana habe tsara
Monocrystalline nanangona alumina, miempo amin'ny hafanana ambony amin'ny alàlan'ny fizotrana manokana, dia fitaovana fikosoham-bary avo lenta. Ny sombin-javatra marokoroko dia fotsy fotsy.
Endri-javatra sy tombony:
1. sodium ambany, ambany 0.2%
2. henjana avo
3. henjana avo
4.Ny hakitroky avo indrindra sy ny fanoherana ambony
5. fitaovana avo lenta farany mahery
6.Smallary kely, tsy mora manimba ny workpiece
Fund corundum matevina dia karazana fitaovana tsy miova amin'ny fahadiovana avo lenta noforonina tamin'ny alàlan'ny alàlan'ny fampiasana ny alumina madio sy ny fihenam-bidy amin'ny mari-pahaizana manokana, fandorana ny lafaoro misy herinaratra ary nangatsiaka. Ny dingana kristaly lehibe dia α-Al2O3 ary ny loko fotsy volo.
1.Ny hakitroky avo indrindra sy ny poria kely tena ambany
2. fanoherana tsara akanjo
3.Fano fanoherana tsara ny maripana avo
4.Hamafin'ny haavon'ny avo
5. fanoherana ny fahatairana tsara
Ny alumina fotsy mifangaro dia fitaovana manta marefo avo lenta, vita amin'ny vovo-dronono alimina indostrialy avo lenta aorian'ny fivoahana amin'ny hafanana ambony ambonin'ny 2200 ℃ ao anaty lafaoro elektrika ary avy eo nangatsiaka. Ny dingana kristaly voalohany dia α-Al2O3, ary fotsy ny loko.
Izy io no fitaovana manta lehibe indrindra amin'ny famokarana reflexaire tsy miova sy miendrika ambaratonga avo, ampiasaina amin'ny indostria isan-karazany.
2.Gy fanoherana tsara sy fanoherana fanoherana
3. mari-pana avo lenta rehefa manao vokatra
4.Hatsarao ny fiorenan'ny volavola sy ny fanoherana ny akora hafanana amin'ny fitaovana.